Apple inobheja neWatchOS 4 yakakura kurovedza muviri neako Apple Watch | Ndinobva mac
Apple inobhejera neWatchOS 4 yakakura kurovedza muviri neako Apple Watch
Tiri kusvika mazuva akakosha ekuratidzwa kwezvigadzirwa neveCupertino vakomana. Chokwadi, imwe nguva mwedzi unouya, Apple ichagadzira yayo yakajairwa Keynote kwainozopa zvigadzirwa zvayo zvitsva zve2017. Uye zvakare, senge remusi iwoyo, zvikamu zvekupedzisira zveanoshanda masisitimu eCalifornian brand anotanga kuvhurwa.
Imwe yekuvandudza kukuru, Kutaura nezveWatchOS kunyanya, iyo inoshanda sisitimu yekuchenjera yekambani, ichave iri yekuisirwa metres yemarudzi ese emitambo uye kurovedza muviri.
Kutenda kumimwe bvunzo yakaitwa neyekupedzisira beta yeCompertino software, vamwe vaunoshanda navo iHelp Vakawana zvinhu zvinoratidzira kuti Apple Watch inosanganisa zvakawanda mukuvandudzwa kwemitambo kuyera, kusanganisira zvimwe zvakaita sebhokisi, nhabvu, Pilates, uye vazhinji vacho. Kunze kwekusanganisa mitambo mitsva, zvinoita sekunge aizowedzerawo mhando dzakasiyana dzekurovedza muviri senge bowling, hove kana kufamba nechikepe.
Nayo nyowani yekushandisa system yeApple watches, WatchOS 4, iyo kambani inotsvaga kugutsa zvese zvinogoneka zvinodiwa zvinouya mupfungwa nehungwaru wachi. Pasina kupokana, iyi nhau ndeyechokwadi chiratidzo chekuti Apple iri kugara ichitsvaga kugadzirisa zvigadzirwa zvayo.
Mubvunzo ndewokuona kana hutsva uhu huchagamuchirwa zvakanaka mumusika, nekuti hazvisi zvakajairika kuona, semuenzaniso, mutambi wetsiva kana mutambi wenhabvu, achidzidzira neangu smart watch. Sezvatinoziva, Apple inogara ichitamba kuti ichinje iyo mirau, uye zvirokwazvo icharwa kuti izviite zvakare.
Tichafanirwa kumirira chimiro chepamutemo cherudzi urwu rwemashoko muKeynote yatinotarisira kuti ichaitika imwe nguva muna Gunyana., iyo yatichava pano tichikuudza zvese zvakadzama uye nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inobhejera neWatchOS 4 yakakura kurovedza muviri neako Apple Watch
Major media vanotaura nezve chiitiko cheApple chaGunyana 12
Sei nyore disvow iTunes kubva kuMac kwedu